Hoy izy ireo | NewsMada
Ny Praiminisitra teo aloha sady mpitarika ny Hiaraka isika, ny Jly Camille Vital : Ho hita eo ny fanatanterahana ny voalazan’ny filoham-pirenena, araka ireny lahateniny ireny. Aoka mba ho firenena tan-dalàna sy hanaraka lalàmpanorenana isika. Manantena izany avokoa ny vahoaka malagasy amin’ny fijerena ny hoaviny… Nambara fa niova fo ny dahalo. Mbola mirongatra anefa izany amin’izao fotoana izao.
Ny filoha nasionalin’ny MDM, Rajaonarivelo Pierrot : Irariana mba ho tanteraka ireny. Ho voavaly ve anefa ny hetahetam-bahoaka ary hipaka any aminy izany ? Ahoana ny fandriampahalemana sy ny kolikoly ary koa ny fanjakana tan-dalàna ? Tokony hatao lahadinika amin’ny fivorian’ny Frankofonia ny « Iles Eparses » fa tsy tabatabaina tahaka io.
Ny prefet-n’i Mahajanga, Rakotoaridina Dieudonné : Mamaha ny olana ny resaka fananan-tany any Marovoay ny lahatenin’ny filoham-pirenena teo iny. Mahavelombolo ny tantsaha ao amin’ny Fifabe, nisedra olana izany. Midika izao fa miverina tanteraka amin’izy ireo ny velaran-tany fambolena any an-toerana.